OIC ကို နိုင်ငံ တွင်း ဉ် အခြေချ ရန် သဘောမတူ သည့် ကန့် ကွက် ပွဲ များ ပြု လုပ် မည် | Freedom News Group
OIC ကို နိုင်ငံ တွင်း ဉ် အခြေချ ရန် သဘောမတူ သည့် ကန့် ကွက် ပွဲ များ ပြု လုပ် မည်
by FNG on October 4, 2012	နောက်ဆုံး ရ သတင်းများ အရ OIC ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြ ပွဲ ကို ရခိုင်ပြည် နယ် တွင် လည်း ကျင်း
ပမည် ဖြစ်သကဲ့ သို့မန္တလေး နှင့် ရန်ကုန် တွင် လည်း အောက် တိုဘာလလည် တွင် ကျင်း ပမည်
OIC အစ္စလာမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ ၏ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ရုံးခန်း နှင့် ၎င်း တို့ 
၏ မည်သည့် ယန္တယား ကို မှ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း လည်ပတ် ရန် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ဉ် ခွင့် ပြု ရန် သဘော မ တူ ကြောင်း မျိုး ချစ် လူငယ် များ ကွန်ယက် မှ တာဝန်ရှိ သူ ကို အေးကျော် က FNG
ကို ပြောသည်။ OIC ကိုယ်စားလှယ် များ သည့် ပြီးခဲ့ သည့် သြဂုတ် နှင့် ဇူလိုင် လ အတွင်း က မြန်မာ နိုင်ငံ သို့ 
ရောက်ရှိ လာ ပြီး မြန်မာ အစိုးရ သမ္မတ ဦး သိန်း စိန် ၊ ပြည်ထောင်စု နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဒုတိယ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး နှင့် အခြား အစိုးရ အရာ ရှိ များ ကို တွေ့ ဆုံ ခဲ့ သည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သည့် နိုင်ငံအများစုနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော OIC အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံများ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ အား ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဖြစ်သည့် မြန်မာ နိုင်ငံ မှ ၀င်ရောက် ခွင့် ပေး ခြင်း
ကို ထိုင်း ၊ သီရိလင်္ကလာ ၊ အိန္ဒိယ နှင့် ကမ္ဘော ဒီယား စသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် အခြား နိုင်ငံ များ
မှ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ၀င်များ က ဝေဖန် ထောက် ပြ မှု များ မှာ ၎င်း တို့နိုင်ငံ ၏ သတင်း မီဒီယာ ထဲ တွင်
ပါ ဖော်ပြ လာ ကြာသည်။
OIC ၏ လက်ဝေခံ လျှို့ ဝှက် အဖွဲ့များ သည် ပုံစံ အမျိုး မျိုး ဖြင့် အခြား ဘာသာ ၀င်များ ၏ နိုင်ငံ တွင်း သို့ဝင်ရောက် ကာ ဘာသာရေး သွေးဆောင် မှု များ ကို ပုံစံ အမျိုး မျိုး ဖြင့် ပြု လုပ် သည် ဟု န ခွန် ဆ၀န် မှ ထိုင် လူ မျိုး သတင်း ထောက် နှင့် ဘလောက် ဂါ ကိယတ် ဆွန်သွန်း က FNG
ကို ပြောသည်။ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ဘုရင် အဗ္ဗဒူလာက သည် OIC မှ တစ်ဆင့် မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ရှိ ဘင်္ဂါလီ
ရိုဟင်ဂျာ များ ကို ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ လှုဒါန်း ထား သည်။
OIC အား မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း အခြေစိုက် စေခြင်း အား ဖြင့် ပိုမို ဆိုးရွား သည့် လူမှု ရေး ၊ ဘာသာ
ရေး ပဋိပက္ခ များ ကြုံ ရ မည် ဟု အတွေ့ အကြုံ ရှိသူ များ က ထောက် ပြ ကြ သည်။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် သမိုင်း ဌာန မှ ဆရာ တစ်ဦး က ” ဦးသိန်းစိန် လည်း အကျပ် အတည်း ထဲ မှာ ဆို တော့ လက်ခံ လိုက် ရတာ ပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် ပြည်သူ က OIC ကို လက်မခံ ဘူး ဆို တဲ့ ဆန္ဒပြမှု
လုပ် ရင် သူ လည်း OIC ကို get out လို့ပြော လို့ကောင်း သွား တာ ပေါ့ ” ဟု ထောက် ပြသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျ အခြေစိုက် OIC ခေါ် အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအသင်း ကို မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း အခြေစိုက် ခွင့် မပေး ရန် ကန့်ကွက် မှု များ ရှေ့ သီတင်း ပတ် ထဲ တွင် စတင် မည် ဟု သိ
ရသည်။ OIC အား ကျယ် ကျယ် ပြန့်ပြန့်ကန့် ကွက် မှု များ သည် ပြီးခဲ့ သည့် သီတင်း ပတ် အတွင်း က
ဘင်္ဂလား ဒေရှ် နိုင်ငံ ဉ် သမိုင်းဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီ ၊ ပုထိုး များ နှင့် ဘုန်းတော် ကြီး ကျောင်းများ
ဖျက်ဆီး ခံ ရ ပြီး နောက် ပိုမို အား ကောင်းလားသည်။
From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ဂျော်ဂျီယာ ပါလီမန် ရွေးကောက် ပွဲ မှာ ရုရှား လိုလားတဲ့ ပါတီ အနိုင်ရ
၂၀၁၄ အမေရိကန် ဒိုင်ဗာစတီ ဗီဇာ များ လျှောက်ထား နိုင်ပြီ →
မဖြစ်သင့် ဆုံးတွေထဲမှာထိပ်ဆုံးကပါနေတဲ့ အကြောင်းအရာပါပြည်သူတွေထက်
ဦးနှောက်ကောင်းလို့အုပ်ချုပ်ေ၇းလုပ်နေတဲ့ လူကြီးမင်းတွေခွင့် ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ တနိုင်ငံလုံးကလဲဒီအတိုင်းကြည့် မနေပါဘူးသူတို့ ဆီမှာတောင်
ကိုယ့် ဘာသာလူမျီုးတွေဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လွှဲဒြီအတိုင်းလုပ်ဖို့ကိုတော့ ဝန်လေးနေမှာမဟုတ်ဘူးလက်သည်းဆိတ်လက်ထပ်နာတတ်ပါတယ်
October 15, 2012	tharmanlu	#
ုငြိမ်းချမ်းတဲ့လူ့အသိုင်းတွေကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ လူသားဗိုင်းရပ်(စ်)တွေကို ငါတို့မြေပေါ်မှာ မျိုးပွါး ရှင်သန်ခွင့် မပြုနိုင်ဘူး
October 14, 2012	Thein Than Htike	#
October 10, 2012	တန့်ဆည်သား	#
လုံးဝ(လုံးဝ) ကန့်ကွက်ပါတယ် ဒါမဖြစ်သင့်ပါဘူး ဒါကိုလည်း သမ္မတကြီးအနေနဲ့ သေချာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေ ဒါက သူတို့ဘက်က ခြေတစ်လှမ်း တက်လာတာပါ ငါတို့ဗမာတွေ လုံးဝကန့်ကွက်သင့်တယ် ငါတို့နိုင်ငံထဲကို ဒီကောင်တွေကို လုံးဝအ၀င်မခံနဲ့ဟေ့ ခွေမသားတွေ ရှေ့မတက်ခဲ့နဲ့ ဒါ ငါတို့မြေ
October 10, 2012	Devil	#
ကန့်ကွက်ပွဲ ပြုလုပ်မည့် ရက်၊အချိန်၊နေရာ အတိအကျ ဖေါ်ပြပေးပါ၊၊ပါဝင်ချင်ပါသည်။။OIC ကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ။။။
October 9, 2012	့honey	#
October 9, 2012	rakha	#
လုံးဝ(လုံးဝ) ကန်.ကွက်ပါသည် ဒီကုလားတွေ လူ.အခွင်.အရေးကို ဗန်းပြီပြီး နယ်မြေချဲ.ထွင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို. ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ ဒီလို အကုသိုလ်ကောင်တွေကို နေရာပေးလို.မရပါဘူး
တကယ်လို.နေရာပေးကြည်.ပါလား နောက်ဆိုရင် ရွှေတိဂုံ စေတီတော်နေရာမှာ ဗလီတွေအများကြီး မြင်ရလာပါလိမ်.မယ် မယုံမရှိပါနဲ. မြန်မာပြည်သူ/သားများသွေးစည်းကြပါလို. မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ
October 9, 2012	မြန်မာလူမျိုး	#
လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်။။ (လုံးဝ)(လုံးဝ) လက်မခံနိုင်ပါ။။။။
October 9, 2012	thet naing	#
လုံးဝကိုလက်မခံသင့်ပါ. . ကန့်ကွက်ပါတယ်..
October 9, 2012	ခြသေ.င်္	#
ဟိုးအရင်တုန်းကစစ်မက်နဲ.သာသနာပြုတယ် ယခုကြတော.ငွေနဲ. နောက်ပြီးတော.လူမျိုးဖေါက်သာသနာပြုတယ်
စီးရုံးရေးဆိုတာမရှိတယ်ဘာသာ လူ.အခွင်.ရေးဆိုတာမရှိတဲ.ဘာသာ မျက်စိပိတ်နားပါတ်သာသနာအင်းပြောရရင်တွေးအခေါ်မရှိစိတ်ကူးယဉ်ဆနိပြီးတော.လက်တွေ.မကျတဲ.ဘာသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို.နိုင်င့ကိုယ်ရောက်လာတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မောင်းတောမှာလူဦးရေတရာလောက်ရှိရာကနောင်နှစ်ပေါင်6း0ကြာတော.400000ဆိုတော.နောင်နှစ်50ဆိုရင်တော.မပြောတော.ပါဘူးဗျာ အခုလည်းOIC၀င်လာရင်မျောက်စက်သနတ်ပေးသလိုကျွန်တော်တို.မျိုးတွေ.(တိုင်းရင်းသား14၀)အတွက်တော်တော်ြ့ကီးကိုယ်ပဲရတက်မအေးစရာပါ။ကျွန်တော်တို.တိုင်းပြည်မှာဒီOICမပြောနဲ.မွတ်ဆလင်နဲ.တူတဲ.ဆိတ်တောင်မထားသင်.တော.ပါဘူိး
October 9, 2012	hero	#
i don’t like muslim , get out.
October 8, 2012	Ko Paing	#
October 7, 2012	thiha	#
OIC ရုံး မြန် မာ ပြည် တွင် ဖွင်. မည် ကို မြန် မာ မျိုး ချစ် တိုင်း အပြင်း အထန် ကန်. ကွက် သင်. သည်။ ကု လား များ သည် တဆင်. လျော. ပေး လျှင် နောက် တဆင်. တက် လာ တတ် သည်။ ယနေ. မဆန်. ကျင် လျှင် နောင် လာ မည်. နှစ် များ၊ ကျွှန်တော် တို. ဧ။် သား မြေး များ လက် ထက် တွင် ထို အကျီုး ဆက် ကို ခံ စား ကြရ မည်။ အလုပ် သမားအရေး၊ လူ အခွင်. အရေး ထက် ဘာ သာ သာ သနာ နိုင် ငံ လူ မျိုး အရေး က ပို အရေး ပါ သည်။ တခြား အရာ များ ကိ
ု လမ်း ပေါ် ထွက် ဆန ထုတ် ဖော် နေ တာထက် ယခု အရေး ကို ပြင်း ထန် စွာ ဆန ထုတ်ဖော် ရန် လို အပ် သည်။ နိုင် ငံ တော် အစိုး ရ၊ လူ ထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည်၊ ပြည် သူ လူ ထု နှင်. တကွ စာ နယ် ဇင်း များ ပူးပေါင်း ဆန်. ကျင်. ရ မည်။ မြန် မာ တို. ဧ။် ဇာတိ စိတ် သည် ကျွှန်တော် တို. ခေတ် တွင် မှ ညံနေ လျှင် ရွှေ တိ ဂုံ ဘု ရားနေ ရာ တွင် ဗလီ များ နေ ရာ ယူ လာ ပေ မည်။ နိုင် ငံ တကာ သံ ခင်း တမန် ခင်း အရ ဆက် ဆံ ရ မည် ဆို ပါ က လည်း လက် ရှိရို ဟင် ဂျာ အမည် ခံ ဘင်္ဂါလီ ကျုးကျော် သူ များ အရေး တွင် လူ အခွင်.အရေး ၊ လူ သား ချင်း စာ နာ မှု ဟု ခေါင်းစဉ် တပ် ကာ ပြော လာ ပါ က ထို လူ များအပေါ် စာ နာ သော နိုင် ငံ များ ( OIC နိုင်ငံ များ) က ထု သူ များကို လက် ခံ ကာ စောင်. ရှောက် သင်. သည်။ ယခု အရေး သည် ပျော. ပျောင်း ကာ ကိုင် တွယ် မူ နောက် ဆုံး အနေ အထား ရောက် နေ ပါ ပြီ။ ပြတ် သား စွာ ကိုင် တွယ် ရန် လို အပ် နေ ပါ ပြီ။ ၀ိုင်း ၀န်း ကာ ကွယ် မှ နိုင် ငံ တည် မြဲ မည်၊ ဘာ သာ တည် မြဲ ပေ မည်။ ကျွန်တော် တို. လုပ် သင်. လုပ် ထိုက်သော အရာ များ ကို နိုင် ငံ တကပာ သိ အောင် လုပ် သင်.နေပါပီ။
October 7, 2012	shoiub	#
မကန်ကွက်ပါ။ နှလုံးသားနဲမဆုံးဖြတ်ကြပါနဲ။ အစိုးရကဦးနှောက်နဲဆုံးဖြတ်ပါ။
October 7, 2012	kelven	#
ကျနော်တွေးကြည့်တာပေါ့… ဖြစ်နိုင်တာက စစ်အစိုးရလက်ထက်.. နိုင်ငံရေးမပြောင်းလဲခင် ဒီကောင်တွေ အသံမထွက်ဘူး.. နောင် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတတ်လာတော့မှ နိုင်ငံရေးအပြောင်လဲ အရ . သေသေချာချာလုပ်ရည်ရွယ်ပြီး..သူတို့လူမျိုး နယ်မြေဖြစ်အောင် ခုချိန်မှ ပြသနာရှာတာလေ..နောက်ဆို သူတို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပါတောင်းဆိုတော့မှာသေချာသလောက်ပဲ….နောက်ပြီး သူတို့အတွတ်.. နယ်မြေသစ်ရှာဖွေသူတွေအတွတ်… ထောက်ပံကြေးကလဲ… သူတို.နောက်မှာ.. အဆင်သင့်တွေအများကြီး..
သေချာတာကတော့.. သူတို့လုပ်နေတာတွေက.. ဘာသာရေးနဲ.လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို အကြောင်းပြပြီ..ခေတ်သစ်..နယ်မြေရှာဖွေခြင်းပဲလေ….ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့… နိုင်ငံရေး..ကမ္ဘာရေး လုပ်နေသူတွေတာမေးကြည့်ကြဗျို……. (လူတိုင်းကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ပေါ့..)
October 6, 2012	ုkyaw Zay Yar Tun	#
လုံး ၀ လက် မခံ နိုင်ပါ။ ရှည်ရှည် ဝေးဝေး စကား ပြော စရာ အ ကြောင်းမရှိပါဘူး
October 5, 2012	greendragon	#
လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဘယ်သောအခါမျှလက်မခံပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသားတိုင်းလက်မခံအပ်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ ကန့်ကွက်ကြပါ
October 5, 2012	ချိန်တန်ပီ	#
မြန်မာနိုင်ငံလဲ အင်ဒိုနီးရှားလိုမျိုး မွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်မှ အားလုံးအေးမှာပါ … ပြည်သူတွေကလည်း ၁၀၀၀ မှာ ၁၀ ယောက်လောက်ကပဲ မျိုးချစ်စိတ်ရှိသလိုဖြစ်နေတယ် …
October 5, 2012	မြန်မာ	#
ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တော့ လုံးဝကန့် ကွက်ပါတယ်။အကြောင်းမရှိဘဲ ကန့် ကွက်နေတာ မဟုတ်ပါ။
ပြည်သူတွေ စိုးရိမ်နေတဲ့အတိုင်း အစိုးရကလည်း စိုးရိမ်နေမှာပါ။ဦးနှောက်နဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ ။ကိုယ့်နိုင်ငံအရေးဆိုတော့ သမ္မတကြီးနှင့်တကွ အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အတူတကွ ချနေကြသော ပုဂ`ဂိုလ်များအားလုံး နှလုံးသားနဲ့ ခံစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြစေလိုပါတယ်။
October 4, 2012	aunghtikesoe	#
October 10, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,569,797 hits
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOW Myanmar News in EnglishBullish Myanmar targets 100 gold medals at SEA GamesMyanmar's surreal capital now less ofaghost townMyanmar releases 41 political prisonersMyanmar frees 44 political prisonersMyanmar's SEA Games host city baffles and delightsMyanmar Army Chief calls on President MukherjeeSEA Games: Myanmar hosts international coming-out partyMyanmar welcomes the worldWant Burma info in your inbox each morning?